Daraasad Cusub oo Sheegtay in Khamrigu uu sababo dhimashada ugu badan ee dadka Faransiiska.
Wednesday February 20, 2019 - 11:50:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Daraasad rasmi ah oo ay soo saartay dowladda Faransiiska ayaa lagu sheegay tobanaan kun oo muwaadiniin Faransiis ah ay sanad walba u dhintaan cudur ay ka qaadeen cabidda Maandooriyaha Khamriga xaaraanta ah.
Sida uu daabacay wargeyska Liberation maalintii Talaadada Khamriga ayaa ah midka labaad ee sababa dhimashada ugu badan ee shacabka Faransiiska sanad walba.
Daraasaddan cusub waxay sheegtay in 41% dadka Faransiiska u dhintaan cudurro ay ka qaadeen cabidda Khamriga, nisbada ragga udhimanaya cabidda khamriga ayaa la sheegay in ay gaartay 11% halka nisbada dumarka u dhimanaya khamriga ay gaarsiisantahay 4%.
Wargeyska Liberation oo helay daraasaddan rasmiga ah ee dowladdu soo saartay ayaa sheegay in macluumaadkan lagasoo aruuriyay in ka badan 20 kun oo ah dadka iibiya Khamriga, dad gaaraya 16,000 oo qof ayey daraasaddu sheegaysaa in sanad walba ay u dhintaan cabidda khamriga halka dadka u dhinta cudurka wadna xanuunka ay gaarayaan 9900 oo qof sanad walba.